Diiwaanka Cannabis • Bogga 2 ee 43 • Dawooyinka Inc.eu
Dulmar guud oo ku saabsan wax kasta oo ku saabsan alaabada xashiishka iyo wararka kale ee la xiriira gudaha iyo adduunka.
Bogga ugu weyn cannabis
Rapper Jay-Z wuxuu la wadaagayaa aragtidiisa ka dib sharciyeynta xashiishadda magaalada New York
Jay-Z oo caan ah oo caan ah oo heesaha caan ku ah, oo leh sumadiisa marijuana, ayaa ugu yeeray warka `` si aad u xiiso badan. '' Jay-Z ayaa wadaagay bayaan jawaab ah ...
Toddobaadkii hore, Guddoomiyaha Andrew Cuomo wuxuu saxiixay sharci lagu sharciyeeynayo xashiishadda madadaalada ee Gobolka New York. Isla markiiba saameyn leh effect
Weligaa hurdadaada kama soo toosin oo ma is tiri, "Riyadee xalay baan ku riyooday?" Ama laga yaabee…
cannabis, Dambi, Daroogooyinka, Caafimaadka
Synthetic cannabinoids, oo sidoo kale loo yaqaan marijuana synthetic, waa kiimikooyin farsameysan oo lagu farsameeyay shaybaarro si loo xoojiyo saameynta ...
Warbixinno cusub ayaa tilmaamaya in qiyaastii 20.000 oo qof oo ku nool Boqortooyada Ingiriiska ay hadda isticmaalayaan kaararka caafimaadka ee xashiishadda ee ay shirkaddu soo saartay sanadkii hore ...
Deganayaasha ka weyn 21 hadda waxay iibsan karaan illaa 3 wiqiyadood oo weed ah waxayna kori karaan ilaa lix dhir oo loogu talagalay shaqsi ahaan ...
cannabis, Caafimaadka, Sharci dejinta & Sharci dejinta
Tasmanians-ku waxay dhawaan u tagi doonaan GP-ga si ay xashiishadda dawada ah u helaan. Waxaa la yiri ikhtiyaarkan waxaa heli kara bukaanada 1 ...
cannabis, Wararka, Wargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Haddii aad la kulanto casuumaad lagu sameeyo Clubhouse, dheh haa. Clubhouse - barnaamijka cusub ee warbaahinta bulshada ee loogu talagalay gaar ahaan ...
In kasta oo kumaankun sano oo xashiishad ah la isticmaalay lana beeray, haddana aqoonta aan u leenahay xeryaha dhirta weli si naxdin leh ayaan loo horumarin. In kastoo aan ...
Wax yar baa laga ogyahay saamaynta xashiishku ku leeyahay burooyinka. Waxaan ka qornay maqaal ku saabsan tan hore. Si kastaba ha noqotee…
Nederland - Cilmi baaristii ugu dambeysay ee ay sameysay machadka Trimbos waxay muujineysaa inuu kordhay isticmaalka xashiishadda sanadkii la soo dhaafay ...
Kooxda ka tirsan isbahaysiga xashiishadda waxay ka kooban yihiin wakiillo ka socda aalkolada, tubaakada iyo qaybaha caymiska. Boorarka iyo istiikarada ayaa laga arkaa ...